Filter ↓ • Sort ↓ • All (98) • Untranslated (77) • Waiting (0) • Fuzzy (0) • Warnings (0)
Title: ခေါင်းစဉ် :	 Details
Registered မှတ်ပံုတင်ထားေသာ	 Details
Nickname အမည်ပြောင်	 Details
Language Switcher ဘာသာစကားပြောင်းခလုပ်	 Details
Confirm Removal ဖျက်ဆီးခြင်းကို အတည်ပြုပါ။	 Details
Must be at least4characters, letters and numbers only. It cannot be changed, so choose carefully! အနည်းဆုံး အက္ခရာ ၄ လုံး ဖြစ်ရမည်၊ ဗျည်းအက္ခရာများ နှင့် နံပါတ်များသာ။ ပြန်လည်ပြောင်းလဲခွင့် မရှိပါ၊ ထို့ကြောင့် သတိထား၍ ရွေးပါ !	 Details
အနည်းဆုံး အက္ခရာ ၄ လုံး ဖြစ်ရမည်၊ ဗျည်းအက္ခရာများ နှင့် နံပါတ်များသာ။ ပြန်လည်ပြောင်းလဲခွင့် မရှိပါ၊ ထို့ကြောင့် သတိထား၍ ရွေးပါ !
&laquo; Back &laquo; နောက်ပြန်သွားပါ	 Details
Sorry, that username already exists! ဒီသုံးသူအမည် ရှိပြီးဖြစ်သည်။ !	 Details
ဒီသုံးသူအမည် ရှိပြီးဖြစ်သည်။ !
%s is your new username %s သည် သင့် သုံးသူအမည်သစ်ဖြစ်သည်။	 Details
%s သည် သင့် သုံးသူအမည်သစ်ဖြစ်သည်။
Log Out ထွက်ပါ	 Details
Edit My Profile ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းကို ပြုပြင်ရန် Details
Website ဝဘ်ဆိုဒ်	 Details
<strong>ERROR</strong>: The comment could not be saved. Please try again later. <strong>အမှား</strong> - မှတ်ချက်သိမ်း၍ မရပါ။ နောက်တစ်ကြိမ်စမ်းကြည့်ပါ။	 Details
<strong>အမှား</strong> - မှတ်ချက်သိမ်း၍ မရပါ။ နောက်တစ်ကြိမ်စမ်းကြည့်ပါ။
Discussion Settings ေဆွးေနွးြခင်းဆိုင်ရာ အြပင်အဆင်များ	 Details
2015-11-20 13:12:38 GMT
General Settings အ‌ေထွ‌ေထွ အြပင်အဆင်များ	 Details